Ibisimqhathe nesinqandamathe eyokulingisa eyokujola noBen 10 - Ilanga News
Home Izindaba Ibisimqhathe nesinqandamathe eyokulingisa eyokujola noBen 10
IFANE nedungamuzi kumlingisi wo-Uzalo indawo abeyidlala yokujola noBen 10 njengoba ethi icishe yachitha umuzi wakhe.
UNtombifuthi Dlamini (osesithombeni) odlala indawo kaMrs Madlala ku-Uzalo kuSABC 1 ngo-20h30 ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu, uthi isithandwa sakhe besingasawubuki lo mdlalo ngenxa yendawo abeyilingisa yokujola nowesilisa omncane kunaye.
Uthi le ndawo ibisicasula isithandwa sakhe, ebesilibeka ngembaba elokuthi kasihambisani nayo. Kulo mdlalo uMrs Madlala ubejola noKhehla abemteketisa ngoKing K (Thobani Nzuza).
Uthe kube nzima ukudlala le ndawo, kwazise ubengumuntu osakhula ekulingiseni, uqale ukulingisa empilweni yakhe ngalo Uzalo. Uqhube wathi ngaphambi kokuthola indawo kulo mdlalo, ubenza umsebenzi wokuhlanza emtholampilo waKwaMashu.
“Bengingakaze ngicabange ukuthi ngelinye ilanga ngiyoke ngivele kumabonakude ngilingisa. Nangesikhathi ngiqala, ngangizoba ngumlingisi ongakhulumi kodwa ohlala esesontweni,” kusho yena njengoba aba yingxenye yawo kusukela uqala.
UNtombifuthi uthi uyakuthokozela ukukhula kwendawo ayidlalayo, kwazise usengomunye wabalingisi abaqavile kulo mdlalo. Ubonge ozakwabo ngokumsiza ukucija ikhono lakhe kwezokulingisa, abalule kubona
uThabo Mnguni olingisa indawo kaMbatha emdlalweni uthi yena wehluke kakhulu kuMrs Madlala, ngoba akasoze ajola nowesilisa omnncane kunaye futhi akalihambi kakhulu isonto. Uveze ukuthi uzalelwe wakhulela KwaMashu kanti namanje usazinze khona. Unezingane ezimbili nezodadewabo azikhulisayo.
Utshele leli phephandaba ukuthi nakuba uyise uCyril Bongani “Kansas City” Mchunu wayevelele, kodwa yena ukhule kanzima, ehlwempu. Uthi njengoba ehlala KwaMashu, eduze nojantshi wesitimela, uyafisa ukuba nohlelo lokuhambela izikole aqwashise ngokuhlonipha ujantshi nezitimela ngoba ziyethusa izingozi abahlale bezibona.
“Izingane ezincane zidlala kujantshi, zigibela futhi zehle isitimela sihamba bese ziyalimala kokunye zilimale,” kusho yena.
Previous articleAkeneme ngezakhe umqeqeshi weChiefs
Next articleUsolwa ngokuzenza uNyazilwezulu